Eegumsa ijoolleef Gama interneetii irratti godhamuu qabu – Barataa
Yeroon jijjiiramee jira. Ijoolleen akka duraatti too’achuun baayee rakkisaa taheera. Garuu immoo akkumma ijoollee balaa gara garaa irraa ittisnu balaa gama intarneetiin isaan muudatus ittisuuf dirqama qaba matiin.
Garuu immoo akkamitti too’achuu danda’u balaa gama intarneetaan isaan qunnamuu danda’uun? Akka isaan intarneeta hin fayyadamne gochuudhaa? Lakki, intarneeta irraa tiksuun baayee waan danda’amuu miti. Sababani isaa jaarraan keessa jirru jaarraa dijitaalaa waan taheef.
Maatiin kamuu daa’imman isaanii akka balaaf saaxilaman kan jaalatu hin jiru. Gama intarneetaan balaa qaamaa osoo hin taane, balaa sammuu cimatu daa’imman irra gahaa jira. Yeroo har’aa kana daa’imman hedduun bilbila ammayawaa fayyadamu. Bilbila isaanii kanaan maal fa’a akka itti fayyadaman maatiin ilaaluu jiraa? Yoo hin jiraanne tahe, daa’imman keessan balaaf kennaa akka jirtan hubattanii too’annaa daa’imman keessani cimsuu qabdu.
Mee qorannoo tokko kan waayee sagaagalummaa gama intarneetaa(pornography) fi ijoollee gabaabinaan akka armaan gadii kanatti ilaaluu dandeenya.
Dhibbantaa 40 ol, Ijoolleen intarneeta irratti fiilmii sagaagalummaa ni ilaalu
Ijoollee 16 keessaa 1 araada kanaan qabamee jira
Ijoollee 12 keessaa 1 mariiwwan sagaagalummaa gama intarneetaan irratti ni hirmaata. Akkasumas qabiyyeewwan sagaagalummaa interneeta irratti ni maxxansa.
Dhibbantaan 30 maatiin ijoolleetti too’annaa osoo hin goone akka intarneeta fayyadamaniif ni eeyyamu
Qorannoon kun baayee nama sodaachisa. Caalatti immoo wanti nama sodaachisaa qorannaan kun kan biyya keenya godhamee miti. Biyya keenya sadarkaa barnootaa fi teeknoolojiin duuba jirtu kana keessatti maaltu akka deemaa jiru tilmaamuun nama hin dhibu. Mootummaanis gama kanaan ijoollee ciccimoo biyya kana jijiiruu danda’an heddu akka jalaa miidhamaa jiran beekee hamma danda’ameen furmaata kennuuf osoo yaalee yaada jedhu kaayuun barbaada. Qorannicha asirraa dubbisuu dandeessu bal’inaan.
Too’annoo ijoollee kee gama intarneetaa gochuu qabduuf wantoota si gargaaran akka armaan gadii kana haa ilaalluu.
Ijoollee kee irratti qorannoo taasisi
Ijoollee kee irratti qorannoo taasisi yoo jedhu, ijoolleen kee sa’aa meeqa interneetii fayyadamu, maal fa’a interneeta irratti fayyadaman kan jedhamanii fi kanneen biroo. Kun kan tajaajiluuf too’annaa daa’imman sanaa cimsuu barbaachisa Moo miti yaada jedhu kaasuuf.
Ijoollee wajjiin qunnamtii gaarii qabaachuu intarneeta irratti
Ijoolleen hedduun miidiyaalee hawaasaa akka facebook irratti yeroo dheeraa dabarsu. Maatiin immoo jara wajjiin haasawaa, taphata yeroo gaarii dabarsuuf yaaluu qaba iddoo barbaade taa’ee. Kun carraa isaan nama hin beekne wajjiin haasawuuf qaban jalaa xiqqeessa.
Marsariitilee hamoo tahan barsiisuu
Daa’imman isaa maatiin akkuma wantoonni qara qabaa akka itti hin fayyadamne, lafaa hin fuune barsiisan gama intarneetaanis wantoonni akkasii akka jiran barsiisuu qaba.
Moosaajilee too’annaa maatii moobayila fi koompiitara isaanii irratti dabali
Kun tooftaa hunda caalaa salphaa taheedha. Maatiin iddoo barbaade taa’ee daa’imman too’achuuf tajaajila. Moosaajilee kunneen daa’imman akka marsariitilee sagaagalummaa hin ilaalle marsariitilee sanneen cufuun/block gochuun tajaajila.
Eenyummaa sobaan interneeta akka fayyadaman ijoollee barsiisi
Eenyummaa sobaa yoon jedhu maqaa guutuu kan biraa, bara dhalootaa, bakka jireenyaa fi lakk bilbilaa kan sobaa kennuudhaan akka isaan intarneeta irratti fayyadaman gochuudha. Kun eenyummaa maatii fi daa’immanii akka hin hatamneef baayee filatamaadha.
Eegumsi daa’immanii Gama intarneetaa baayee ulfaataa fi rakkisaadha. Tahus tooftaaleen armaan kunneen hamma tahe daa’imman too’achuuf ni gargaaru.
Wanti guddaan nuti hubachuu qabnu daa’imman gama intarneetaan too’achuun caalatti kan milkaayu yoo isaan wajjiin iftoomina uumne qofaadha. Kanaafuu isaan wajjiin iftoomina gaarii qabaachuu barbachisa.